Mụọ otu esi azụ ahịa Bitcoin na Eprel 2021 | Mụọ Nduzi Azụmaahịa 2
Muta otu esi ahia Bitcoin - Nduzi kachasị na Bitcoin!
Trazụ ahịa ego dijitalụ site na nkasi obi nke ụlọ dịtụbeghị mfe maka ọchụnta ego Nkezi Joe. Mkpụrụ ego izizi nke izizi na ụwa - Bitcoin ka ga-abụ ahịa dijitalụ kachasị ahịa n'ụwa niile.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị na-ejegharị gị site na ihe ndị kachasị mkpa ịchọrọ ịmụta otú e si azụ ahịa Bitcoin. Anyị na-ekwu maka ụgwọ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị, atụmatụ azụmaahịa, iwu, njikwa ihe egwu, na ndị ọzọ!
Akụkụ 1: Ghọta Ntọala nke Otu esi azụ Bitcoin
N'ihi nnukwu ekele maka mmiri mmiri na volatility, a na-akpọ Bitcoin dị ka ọla edo dijitalụ. Ka o siri dị, ọ bụ ihe kachasị mkpa na ị ghọtara ihe ndị bụ isi otu esi azụ ahịa cryptocurrency a tupu iwere ya.
N'ime ime nke a, ị ga-enye onwe gị ohere kachasị mma nke ịzụ ahịa n'ụzọ egwu na ịgbakọ.
Kedu ihe bụ isi nke Bitcoin Trading?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Bitcoinzụ ahịa Bitcoin gụnyere ịnwa ịkọ amụma ọnụego ego nke mkpụrụ ego dijitalụ mechara gbadaa. Ọnụahịa ya bụ nke a na-ekwu site na nnweta na ọchịchọ nke ahịa.
Lee n'okpuru ihe atụ bara uru nke ahia Bitcoin iji kpochapụ foogu:
Were ya na ị na-ere Bitcoin megide euro
A ga-egosipụta nke a dị ka BTC / EUR na ntanetị ị họọrọ
N'oge ahia gị, BTC / EUR bara uru na $ 45,162
Na-eche dị ka ụzọ ga-ahụ a price abawanye - ị kpebiri ime ihe a ịzụta ịtụ ahịa $ 1,000
Oge gafere na BTC / EUR na-abawanye uru site na 5% - nke pụtara na ọnụahịa ọhụrụ nke $ 47,420
Site na $ 1,000 mbu i tinyere - ị nwetara uru nke $ 50 ($ 1,000 + 5%)
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụrụ na ịzụta ụzọ Bitcoin ma zie ezie na nkwupụta gị, ị kwụ ọtọ iji nweta uru. Maka ndị na-amaghị, ị nwekwara ike ịga mkpụmkpụ na Bitcoin - nke anyị na-ekpuchi ma emechaa na ntuziaka a.
Trazọ ahia ahia Bitcoin
Mgbe ị na-achọ ịmụta otu esi azụ Bitcoin, ị ga-ahụ na ụzọ abụọ dị iche iche dị na tebụl. Ọ bụrụ n’ịzụala ahịa Forex tupu ị mara ntakịrị gbasara otu esi arụ ọrụ.
Maka ndị na-enweghị ahụmịhe ego na ikike ọ bụla - a na-enyere ndị ahịa cryptocurrency ụzọ abụọ. Zụ ahịa abụọ na-enyere gị aka ịkọ ọnụ ahịa n'etiti mkpụrụ ego dị iche iche wee gosi uru ọ bara.
Zọ kachasịsịsịsị ahịa maka ịzụ ahịa Bitcoin, ọkachasị maka ndị ọhụrụ, bụ ụzọ abụọ 'crypto-to-fiat'. Nke a gụnyere ịzụ ahịa Bitcoin megide ego ego. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ego ego a na-akwụ ụgwọ bụ nke ndị gọọmentị kwadoro ma na -emepụtakarị. Platformsfọdụ usoro ntanetị na-akpọ ụdị abụọ a 'ego obe'.
Otu n'ime ụzọ abụọ ndị ahịa a na-azụ ahịa na ụdị a bụ Bitcoin megide dollar US - egosiri dị ka BTC / USD. Ndị ọzọ na-ewu ewu na abụọ gụnyere Bitcoin megide (GBP) British pound, euro (EUR), Switzerland franc (CHF), na Australian dollars (AUS).
Iji nwetakwuo nkọwa, ọ bụrụ na ị na-ere BTC / AUS ma kwuo ihe dị ka $ 68,545 - 1 Bitcoin ọ bụla ruru 68,545 dollar Australia.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ị na-ere BTC / EUR ma hụ ọnụahịa nke ,44,547 1 - 44,547 Bitcoin ọ bụla ruru XNUMX euro.
Hụ ihe atụ n'okpuru ahia fiat-Bitcoin:
Are nwere mmasị ịzụ ahịa Bitcoin megide dollar Australia
A ga-egosipụta ụzọ a dị ka BTC / AUD, ma e hotara gị AU $ 67,749
Have nwere mmetụta siri ike ọnụ ahịa nke ụzọ a ga - arị elu - yabụ tinye usoro $ 500 ịzụta
Okwu nke ụbọchị gafere na BTC / AUD dị ọnụahịa na AU $ 77,234
Bitcoin megide AUD abawanyela uru site na 14% - yabụ amụma gị ziri ezi
Dị ka ndị dị otú a, ị na-etinye a ere nye iwu ka ị nwee ike ị nweta ego na uru gị
Dịka ị pụrụ ịhụ, n'ihi na BTC / AUD mụbara na ọnụahịa (dịka ị chere na ọ ga -) - ị nwetara uru nke $ 70 ($ 500 + 14%).
Anyị kwuru banyere oge gara aga na ọtụtụ ndị mbido na-ahọrọ ahia Bitcoin site na ụzọ abụọ crypto-fiat. Ihe kpatara nke a bụ na ọ dị mfe ịtụle otu ụzọ gụnyere ego gọọmentị nyere ego karịa ọ bụ nke ọzọ dijitalụ.
Dị ka anyị kwuru, ọ bụrụ na ị chere na Bitcoin ga-akụda, ị nwere ike ịhọrọ ịga mkpụmkpụ na ego dijitalụ. Nke a bụ n'ihi na a na - azụ ahịa abụọ abụọ Bitcoin site na CFDs - nke anyị na - ekwu maka obere oge.
Crypto Cross-ụzọ abụọ
Zọ ọzọ iji zụọ ahịa akụ a bụ site n'ịzụ ya megide cryptocurrency ọzọ. A na-akpọ nke a crypto-cross couple (mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya 'crypto-cross'). Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị ga-azụ Bitcoin megide Ripple - a ga-egosi nke a dị ka BTC / XRP.
Hụ okpuru ihe atụ, iji BTC / XRP:
Cross ụzọ BTC / XRP bụ ọnụ na 93,587
Dịka, maka 1 Bitcoin ọ bụla, ahịa ahụ ga-enye gị uru 93,587 nke Ripple
Ọ dị mfe dị ka nke ahụ. Ajụjụ bụ - ọnụego mgbanwe nke ụzọ abụọ a na-ajụ ga-ebili ma ọ bụ daa? E nwere ụzọ dị iche iche iji nyere onwe gị aka ma a bịa ime mkpebi ndị ziri ezi. Dị ka nke a, ihe kachasị mkpa bụ ịme ọtụtụ nyocha na ahịa Bitcoin ị họọrọ.
Etu esi ahia ahia Bitcoin: Ogologo oge ma ọ bụ ogologo oge?
Ugbu a anyị kwurula banyere ihe ndị bụ isi, anyị kwesịrị ikpuchi otu esi azụ Bitcoin na nkenke na ogologo oge.
O doro anya na CFDs bụ ụzọ kachasịsị esi ere ahịa ọ bụla na obere oge n'oge a. Bitcoin CFDs na-agbaso ọnụahịa ụwa nke ego dijitalụ - na-azọpụta gị mkpa nke ya.
Bitcoin CFDs na-enyere gị aka dị ka onye na-azụ ahịa ịkọ nkọ na 'gaa mkpụmkpụ' ma ọ bụrụ na ị chere na Bitcoin karịrị akarị ma na-achọ ịhụ ọnụ ahịa ga-ada. Emere nke a site na ịmepụta usoro ire site na onye na-ere ahịa na ntanetị.
Lelee ihe atụ nke Bitcoin CFD n'okpuru:
Na-azụ ahịa Bitcoin megide Stellar
BTC / XLM dị ọnụ na 114,322
O doro anya na Bitcoin CFD gị bara uru na 114,322
Ọ bụrụ na ị chere na ụzọ ahụ ga-eme bilie na uru - ike a ịzụta ịtụ n'ahịa ịzụ ahịa ị họrọ
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na i chere na ụzọ ahụ ga-eme -ada na uru - ike a ere ịtụ n'ahịa ahịa
Ọ bụrụ na ụzọ abụọ ahụ bilie ma ọ bụ daa, n'ikwekọ na nkwenye gị - ị ga-enweta uru na azụmaahịa a
A na-emeghe Bitcoin CFDs maka oge, ụbọchị, ma ọ bụ ụfọdụ izu. Obere oge CFDs ga-emeghee ka mma. Nke a bụ n'ihi na ụbọchị ọ bụla a na-ahapụ azụmaahịa CFD mepee ego ego abalị ga-akwụ ụgwọ ụfọdụ ndị na-enye ọrụ ga-ezo aka na nke a dị ka 'ego mgbanwe', na, ụgwọ ahụ na-adịkarị ntakịrị na ngwụsị izu.
Na ndị na-ere ahịa dịka eToro, ị ga-ahụ ụgwọ a ga-akwụ ụgwọ n'abali ka ị banyere na itinye ego gị. Nke a na - enyere gị aka ịhụ ihe ị na - akwụ ụgwọ ego ị na - akwụ ụgwọ n'abali na azụmaahịa CFD gị.
Site na nke ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ na ị ga-achọ ịnwe usoro atụmatụ ogologo oge ma zere ụgwọ ndị a - lee n'okpuru.
Zụrụ ma jide Bitcoin
Ndị ahịa ogologo oge na-azụkarị Bitcoin ma jigidesie ya ike - ya mere a na-akpọ aha atụmatụ ahụ 'ịzụta ma jide'. N'ihe banyere cryptocurrencies, ọkachasị, a na-akpọ nke a 'HODLing'. Ergo, ọ bụrụ na ị zụta Bitcoin ma na-ejide ya - ị bụ 'Hodler'!
Ndị Hodlers na-ejigide Bitcoin ruo ọtụtụ afọ n'otu oge tupu ha ewepụta ego ha. Na onye na-enye Bitcoin eToro dị elu, ị ga-enwe ike ịzụta Bitcoin ozugbo - na-akwụ ụgwọ ihe ọ bụla na ụgwọ ọrụ. A ga-eme nke a site na ụlọ ahịa agbakọtara ọnụ na a ga-enye gị obere akpa Bitcoin mgbe ị debanyere aha.
Site na ahia Bitcoin na ogologo oge, ị gakwaghị mkpa ichegbu onwe gị gbasara obere oge ọ bụla n'ahịa. Atụmatụ ịzụta na njide na-egbukwa ihe achọrọ iji rụọ ọrụ nyocha kwa ụbọchị.
eToro na-enye ohere ịnweta ego dijitalụ iri na isii na karịa 16 ụzọ abụọ tradable. Nke a gụnyere ọtụtụ ụdị abụọ crypto-cross, yana ụzọ fiat-to-crypto dị ka BTC / USD - na ọtụtụ ndị ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanye ma emechaa.
Akụkụ 2: Mụta Iwu Bitcoin
Tradezụ ahịa Bitcoin ịkwesịrị ịnagide oke ifufe ahụ megide oke volatility. Nakwa ịbụ ihe dị oke mkpa - ụfọdụ iwu nwekwara ike inyere gị aka belata mbibi gị na azụmaahịa ọ bụla.
Malite na iwu kachasị mkpa iji gbanye Bitcoin - zụta ma ree. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na i chere na Bitcoin abaghị uru ma na-achọ ịhụ mgbanwe nrịgo elu - ịkwesịrị ịbanye n'ahịa ahụ ịzụta iji. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, mgbe oge iji pụọ na ọnọdụ gị - ịkwesịrị iji a ere iwu.
Ọ bụrụ na ị na-eche na Bitcoin overvalued na ga-enweta a ọnụ na ọnụahịa - mepụta a ere ịtụ ahịa gị. Mgbe ị chọrọ ịkpata ego, ị ga-esi a ahịa wepu the ahịa ịzụta iji
Ọnụ ego Bitcoin na-agbanwe na nkeji ọ bụla na-agafe, yabụ ọ dị oke mkpa ịnwe usoro ntinye na ụzọ ọpụpụ maka ọdachi ọ bụla.
Malite na ahịa na oke iwu, ị ga-ahụ nkọwa nke abụọ n'okpuru.
A na-ahakarị 'usoro ahịa' dị ka nke ndabara mgbe ị na-abanye n'ọnọdụ na ntanetị n'ịntanetị. Usoro elementrị a na-agwa onye na-ere ahia gị na ị masịrị ọnụahịa ahịa ugbu a nke Bitcoin ma chọọ ka emezue iwu gị ozugbo.
N'ụzọ dị mkpa, n'ihi mgbanwe oge niile na ọnụahịa nke Bitcoin - ọnụahịa ị na-ahụ mgbe ị melite usoro na nke gi na- ga-iche.
Edere gị $ 53,427 na BTC / USD
Obi dị gị ụtọ na ọnụego ahụ, ị ​​na-etinye usoro ahịa
Platformzụ ahịa ịzụ ahịa na-eme iwu gị ozugbo
Check na-elele iji na price bụ $ 53,428
Ọdịiche a bụ nkeji, mana enweghị ike izere ya, n'ihi mgbanwe ọnụahịa na-agbanwe agbanwe
Zọ ọzọ iji tinye ahịa Bitcoin bụ site na iji 'oke-iwu'. Nke a na - enyere gị aka ịhọrọ ọnụego ntinye nke gị.
Bitcoin dị ọnụ $ 53,427 ma ị na-achọ ịtụ ahịa ịzụta
Agbanyeghị, ịnweghị mmasị ịbanye n'ahịa ahụ ruo mgbe ọ ga-eru $ 57,200
Dị ka ndị dị otú a, ịkwesịrị ịtọ oke njedebe gị $ 57,200 mgbe ị na-etinye iwu gị
Ọ bụrụ na ma ọ bụ mgbe Bitcoin bilitere na $ 57,200, oke ịgba gị ga-egbu onye na-ere ahịa gị. N'ụzọ dị oke mkpa, iwu ahụ ga-adị ka ọ dị ruo mgbe ọnụahịa a ruru, ma ọ bụ kagbuo ya.
Anyị ekpuchiwo otu esi eme ya tinye n'ahịa mgbe ịhọrọ iji zụọ ahịa Bitcoin, yabụ ugbu a, anyị nwere ike ikwu maka gị Ụzọ ọpụpụ atụmatụ. Inwe atụmatụ ụzọ ọpụpụ bụ ụzọ dị mma iji zere ịlafu nnukwu ego na azụmaahịa anaghị aga ịhazi. A sị ka e kwuwe, enwere ike maka azụmaahịa Bitcoin ịga n'akụkụ ọzọ karịa ka ị tụrụ anya ya.
Ndị ahịa nke ụdị na nha niile na-eji iwu 'nkwụsị-ọnwụ' eme ihe. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, site n'ịgbakwunye usoro a n'ahịa ọ bụla, ị nwere ike ịkwụsị mfu gị n'otu oge. Ebumnuche bụ iji gbochie gị ịlafu karịa ihe ịchọrọ ma ọ bụ ego nwere ike.
Hụ ihe atụ n'okpuru nke otu usoro nkwụkwụ ụgwọ ga-esi chebe azụmaahịa Bitcoin site na nnukwu mfu:
Na-ere Bitcoin megide pound ndị Britain
BTC / GBP dị ọnụahịa na, 38,095 na ị kpebiri idobe a ịzụta iji
Chọghị ida karịa 3% na azụmaahịa a
Dịka, ịtọziri usoro nkwụsị na 3% n'okpuru ọnụahịa ntinye
Ọ bụrụ na ị ga - eme obere ma tinye a ere ịtụ - tọọ nkwụsị nkwụsị na 3% n'elu ọnụahịa ntinye
Iwu nkwụsị na-akpaghị aka. Yabụ, ozugbo itinyela iwu gị, ịnwere ike ịnọdụ ala chere maka ọnụahịa Bitcoin ịrị elu ma ọ bụ ịda. Tradinglọ ọrụ ịzụ ahịa ga-eme iwu gị iji kwụsị nfu gị ozugbo ngwa ahịa ahụ dara / bilie na ọnụahịa ahụ.
Iwu ọzọ bara uru mgbe ị na-achọ ịmụ etu esi azụ ahịa Bitcoin bụ usoro 'take-profit'. Onye a achoghi obere nkowa dika o kwesiri ka o kwusi na mbu. Ihe dị iche bụ nke a bụ na iwu nkwụsị na-egbochi ọghọm gị ịpụ n'aka - ebe iwu ị na-erite uru na-egbochi uru gị.
Dị ka ndị dị otú a, iwu iji nweta uru na-agwa onye na-ere ahịa gị na ọnụahịa ego ị ga-achọ imechi azụmahịa Bitcoin gị ma nweta ego gị.
Lee otu ihe atụ n'okpuru:
Chọrọ ịme 6% na ahia Bitcoin gị
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ị banye na a ịzụta ịtụ - ịkwesịrị itinye ego na-enweta ego na 6% n'elu ọnụahịa ntinye
Ọ bụrụ na i banye ahịa na a ere ịtụ - ịkwesịrị itinye uru na 6% n'okpuru ọnụahịa ntinye
Dị ka o doro anya iji hụ site na ihe atụ dị n'elu, n'agbanyeghị ụzọ ọnụahịa Bitcoin si aga, ị nwere iwu iji kwụsị nfu / mkpọchi na uru. Kedu ụzọ ọ bụla, onye na-ere ahịa ga-emechi ọnọdụ ahụ na-akpaghị aka, na ọnụahịa ị gwara gị.
Nkebi nke 3: Mụta Bitcoin Risk-Management
Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ịmụta etu esi azụ Bitcoin maka ndị mbido bụ nghọta njikwa ihe egwu.
Dịka anyị metụrụ aka, Bitcoin bụ akụ na-enweghị atụ. Ergo, nke ka ịkwadoro nke ọma, ọ ka mma maka uru azụmaahịa gị. Are na-emefu ma na-etinye ihe ize ndụ nke ego ị tara ahụhụ siri ike.
Na nkenke, usoro nchịkwa ihe ize ndụ gụnyere ịtọ ntọala na usoro maka onwe gị tupu na n'oge azụmaahịa. Lee n'okpuru maka mmụọ nsọ mgbe oge ruru ka ịmụ ka esi azụ Bitcoin ma mepụta atụmatụ dabara maka mkpa gị.
Nchịkwa Bitcoin bankroll
Nchịkọta bankroll Bitcoin bụ atụmatụ ndị ahịa na-ejikarị eme ihe niile. Iji mee ka usoro a dị mfe - rụọ ọrụ na percentages.
Nwere ike ikpebi iburu osisi ọ bụla na 3%. #
Nke a pụtara na adịghị mkpa ma ị nwere $ 100 ma ọ bụ $ 100,000 na akaụntụ azụmaahịa gị - naanị ị ga-etinye 3% n'ihe egwu na ọnọdụ.
Dịka, ọ bụrụ na ị nwere $ 3,000 - etinyela ihe karịrị $ 90 n'ihe egwu.
Ọ bụrụ na ị nwere $ 1,000 fọdụrụ, etinyela ihe karịrị $ 30.
Sistemụ a dị mfe itinye na atụmatụ gị, n'agbanyeghị otu ị siri zụọ ahịa Bitcoin. Naanị rụọ ọrụ ngwa ngwa tupu e kee iwu ọ bụla - dabere na njikwa azụmaahịa gị n'oge ahụ.
Trading Bitcoin site na Egwu na wardgwọ Ọrụ
A na-enweta usoro ihe egwu na ụgwọ ọrụ. Chee echiche banyere ego ị ga - enweta mgbe ị na - achọ ịzụ ahịa Bitcoin - yana ole ị dị njikere itinye n'ihe egwu iji nweta ya.
Ka anyị kwuo na maka $ 1 ọ bụla ị gụrụ, ịchọrọ ịhụ $ 2 na nloghachi
Nke a ga - abụ atụmatụ 1: 2 dị ize ndụ / ụgwọ ọrụ
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ị tinye $ 200 - ị na-atụ anya ị nweta $ 400 na uru
Ọ bụrụ na ị na-etinye $ 1,000 n'ihe ize ndụ na ọnọdụ Bitcoin - ị ga-atụ anya $ 2,000 na uru
Ihe ndị ae kwuru n'elu na-efu na iwu na-abaghị uru dị oke mkpa maka iji usoro a eme ihe n'ụzọ zuru ezu.
Maka ndị na-amaghị, leverage pụtara na ị nwere ike ịzụ Bitcoin karịa ihe ndekọ akaụntụ gị na-enye ohere. Leverage na-abụkarị ihe atụ dị ka oke ma ọ bụ otutu ma ọ bụ nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-enye aka n'akụkụ Bitcoin CFDs.
Lee n'okpuru ihe atụ nke leverage eji na azụmaahịa Bitcoin:
Nwere $ 1,000 ugbu a na akaụntụ azụmaahịa gị
Kpebiri idobe a ịzụta ịtụ na BTC / EUR
Tradinglọ ọrụ ịzụ ahịa na-enye gị ntinye ego 1: 2
Nke a gbanwere $ 1,000 gị ka ọ bụrụ $ 2,000
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọbụnadị ịba ụba okpukpu abụọ gị nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na uru gị. Nsogbu ya bụ, nke a nwere ike ịbụ mma agha ihu abụọ. Site na nke a, anyị na-ekwu na ebe nkwụnye ego na-enye gị ohere iji bulie uru gị, ọ dị nwute, ọ bụrụ na ihe agafee ụzọ ọzọ, ha ga - eme ka ọghọm gị belata.
N’ụzọ dị oke mkpa, iwu machibidoro CFDs ugbu a na US. Ọ bụrụ na ị si na US, nke a pụtara na ị nweghị ike ịnweta leveraged Bitcoin CFDs. Ndị ahịa UK nwere ike ịnweta leveraged CFDs, mana ọ bụghị na Bitcoin, ma ọ bụ ihe mkpuchi ọ bụla ọzọ.
Fọdụ ikike na-enye ohere ịnweta leverage na-enweghị mmachi ọ bụla na ebe. Dị ka ndị dị otú a, gbaa mbọ chọpụta ihe ga-adị gị mma ebe ị bi. Ọ dịkwa mma ka ị jide n'aka na ị na-emeso ndị na-eweta Bitcoin ndozi. Oghere ụfọdụ anaghị achịkwa nwere ike inye ego dịka 1: 500 leverage, nke nwere ike ọ gaghị abụ iwu na obodo gị.
Nkebi nke 4: Mụta otu esi enyocha ọnụahịa Bitcoin
Inwechaa akụkụ 1-3, ị ga-enwe mmetụta karịa maka etu esi azụ Bitcoin. Ebe akụkụ buru ibu nke mmụta bụ ijigide ụdị iwu na ụdị dị otu a - ọ dịkwa mkpa ịghọta etu esi enyocha ọnụahịa.
A sị ka e kwuwe, ihe ka ọtụtụ n'ime mkpebi gị, na olile anya uru, ga-adabere n'echiche gị na nduzi nke uru Bitcoin.
Nnyocha nyocha na Bitcoin
Yingmụ nyocha bụ isi gụnyere ịmara akụkọ banyere akụ na ụba na akụnụba nke nwere ike imetụta ọnụahịa Bitcoin.
Lee n'okpuru maka ụfọdụ ngosipụta nke ihe ị ga-ele anya maka:
Achọ ma nweta
Nkwupụta sitere na gọọmentị gbasara akụ na ụba-akụ
Mpi mkpụrụ ego dijitalụ na isi ahịa
Ihe omume geopolitical
Isi akụkọ mgbasa ozi na-atụ egwu
Nweta ụgwọ ọrụ Bitcoin
Nkwupụta ntụgharị ọnụ
Ọnụ nke Ngwuputa Bitcoin
Iwu na iwu (ma ọ bụ enweghị)
Ọ bụrụ na nke a dị ka nke ukwuu iji lekwasị anya, ị nwere ike ịtụle ịbanye maka ọrụ ndenye aha Bitcoin. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enweta mmelite oge na akụkọ metụtara akụ ị na-ere.
Ọ na-aga n'ekwughị na ọrụ mgbasa ozi na-eme ka ọ dịkwuo mfe oge ahịa. Dị ka ndị dị otú a, ị ga-enwe ike irite uru site na mbọ azụmaahịa Bitcoin gị.
Nkà na ụzụ na Bitcoin
Nyocha teknụzụ gụnyere iji data ọnụego iji chọpụta mmetụta nke ahịa, site n'oge gara aga na ugbu a. Nke a na - enyere aka ịkọwapụta ebe ọnọdụ Bitcoin na - esote nwere ike ịmalite ma ọ bụ kwụsị. Iji ụdị eserese ndị a mee ihe ga - eme ka mkpebi mkpebi Bitcoin gị dị mfe ịga n’ihu. Fọdụ n'ime ihe ngosi ndị a na-ejikarị eme ihe bụ Index Relative Strength, MACD egosi, Ngagharị Nkezi, na Nkezi Nduzi Nduzi. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe ngosi Bitcoin
Maka ndị na-aghọtachaghị ihe mgbagwoju anya nke nyocha teknụzụ - ị nwere ike ịchọ ịmụta etu esi azụ ahịa Bitcoin site na mgbama.
Ejiri akara ngosi Bitcoin mee ihe site na oge bara uru ma nwee ike iji ya tụnyere ndụmọdụ azụmaahịa. Nke a pụtara na ị debanyere aha na ọrụ ma gharakwa mkpa ịme nyocha ọ bụla. Kama, ikwesiri idebe iwu akwadoro ma oburu na odi gi nma.
Ihe ngosi ahia Bitcoin ga-agunye ihe ndia:
Zụta ma ọ bụ Ree
Ọnụ ego ntinye a tụrụ aro
N'ikpeazụ, ọnụahịa nkwụsị-ọnwụ
Ebe a na Mụta 2 Trade, anyị na-enye ikpo nke mgbaàmà crypto - na-echekwa gị oge nyocha!
Akụkụ 5: Mụta otu esi ahọrọ Bitcoin Broker
Họrọ ezigbo onye na-eweta ahia Bitcoin dị mkpa. Anyị na-enyocha ma nyochaa ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na oghere ahịa. Nke a na - esote usoro nlele nke usoro iji chọta usoro kachasị mma maka ndị na - agụ akwụkwọ anyị.
Mgbe oge ruru ka ị mee nyocha nke gị, na ịchọta ịchọta usoro ịzụ ahịa Bitcoin bara uru oge gị - ị nwere ike ịlele ndepụta nyocha anyị n'okpuru maka mmụọ nsọ.
Enweghị iwu, ọkachasị mgbe ị na-azụ ahịa cryptocurrencies, kwesịrị izere. Ndị a ma ama ama maka ịbụ ndị hacked. Ọzọkwa, ị gaghị ama ma onye na-ere ahịa ọ kwadoro ruo mgbe ọ gafere.
Iji zere omume ezighi ezi, izu ohi, na wayo - ọ dị oke mkpa na ị ga-edebanye aha na ndị na-eweta Bitcoin. Maka ndị na-amaghị, ị ga-amata na a na-achịkwa ikpo okwu azụmaahịa dịka ọ ga-egosi nọmba ikike na weebụsaịtị ya.
Regulọ ọrụ na-ahụkarị n'ahịa ahịa bụ FCA (UK), ASIC (Australia), MAS (Singapore), CySEC (Cyprus), na FINRA (US). Enwere ndị aka ole na ole, mana ọ bụrụ n'ịhụ ụlọ ọrụ ndị a na ụlọ ọrụ ị họọrọ, ị mara na ịnọ n'aka nchekwa.
Ndị na-ere ahịa na iwu niile ga-agbaso ndepụta nke usoro iwu na-akwadoghị nke ndị isi ego na-eme. Nke a gụnyere nghọta ego, nkewa nke ndị ahịa, nyocha na oge zuru ezu na ndị ọzọ. Nke a na-eme ka ndị na-ere ahịa ntanetị dị ọcha na nke ziri ezi nye onye ọ bụla.
Iji mee ka wiil ndị ahụ na-agagharị ma na-enye ọtụtụ nde ndị ahịa ọrụ ọrụ kwa ụbọchị - ndị na-enye Bitcoin ihe niile ga-akwụ ụgwọ ụgwọ na / ma ọ bụ ọrụ.
Hụ n'okpuru ụfọdụ ego a na-ahụkarị ụgwọ azụmaahịa Bitcoin.
A na-ebo ebubo ọrụ ahụ niile dị ka pasent, nke ga-adabere na nha ọnọdụ Bitcoin gị.
Lett si kwuo na onye na-ere ahịa gị na-akwado ụgwọ ọrụ 1%. A ga-akwụ ụgwọ a ma mgbe ị banyere n'ahịa Bitcoin na na-apụ.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na imeghe ọnọdụ Bitcoin bara uru $ 1,000, ị ga-akwụ $ 10 ọrụ iji banye n'ahịa ahụ.
Ọ bụrụ na ọnọdụ gị ruru $ 1,600 maka imechi azụmaahịa - ị ga-akwụ $ 16 - na ndị ọzọ.
Fọdụ ndị na-ere ahịa na ntanetị na-ekwupụta ihe ruru 2% maka azụmaahịa ọ bụla. Dị ka ị pụrụ iche n'echiche, ụgwọ ndị a n'oge na-adịghị anya nwere ike irifu uru gị.
EToro onye na-ere ahịa n'ịntanetị na-enye gị ohere ịzụ ahịa Bitcoin na ntọala enweghị ọrụ. Dịka, na ahia dị n'elu, ị gaara echekwa $ 26 maka azụmaahịa Bitcoin ọzọ gị!
Mgbasa n'ahịa niile bụ ọdịiche dị n'etiti ugbu a ịzụta ọnụahịa na ere ọnụahịa nke Bitcoin. Mgbasa a na-eme ka ikpo okwu na-agbanwe uru na-adịghị mkpa n'echiche ahịa.
Ka anyị were ya ịzụta price nke Bitcoin bụ $ 47,765
The ere ọnụahịa bụ $ 48,142
Ngụkọta ngwa ngwa na-egosi anyị na nke a dị ka mgbasa nke 0.79%
Dị ka ndị dị otú a, ị na-amalite ahia gị 0.79% na-acha uhie uhie
Dịka ọ dị n'elu, ọ bụrụ na mkpụrụ ego dijitalụ abawanye uru site na n'elu 0.79%, a na-agụta dị ka uru na ahia gị.
Anyị Mụta Otu esi ahia Bitcoin Guide chọpụtara na ọtụtụ ndị na-ere ahịa ọhụụ na-enyere gị aka itinye ego na akaụntụ gị site na ịhọrọ usoro ịkwụ ụgwọ.
Paymentdị ịkwụ ụgwọ kachasị ọsọ na nke kachasị adaba bụ kredit na kaadị debit, yana e-wallets. Chee echiche banyere usoro PayPal, Neteller, na Skrill maka nke ikpeazụ.
Usoro nkwụnye ụgwọ kachasị nwayọ maka onye na-eweta Bitcoin gị ịhazi ihe ga-abụrịrị nnyefe ụlọ akụ - nke nwere ike iburu ebe ọ bụla n'etiti ụbọchị abụọ ruo izu.
Broka kacha mma ahia Bitcoin na ntanetị
Anyị kwuru na mbụ na anyị anaghị ewere ọchụchọ anyị maka ndị na-ere ahịa ka ọ dị mfe ma tinye ọtụtụ ọnụọgụ igodo iji nyochaa.
N’iburu nke ahụ n’uche, anyị echeberela gị ọtụtụ ihe ị ga-arụ na ntanetị. Lee n'okpuru ndi ahia anyi kacha nma ka ahia Bitcoin ugbua!
1. eToro - Kachasị mma Bitcoin Broker 2021
eToro na-elekọta ọtụtụ nde ndị ahịa Bitcoin na ndị na-etinye ego kwa ụbọchị. Ọzọkwa, usoro ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ na-arụ ọrụ n'okpuru nlekọta anya nke ASIC, FCA, na CySEC. Broker ahụ kwadoro ya ma bụrụ onye otu FINRA na US. Dị ka anyị kwuru, ndị njikwa ego a na-ahụ na ndị na-ere ahịa na-anọgide na-akpa agwa ma na-arụ ọrụ dị elu.
N'ihe banyere ahia Bitcoin, ị nwere ike gbanye ya megide ego ego dị ka dollar US, pound ndị Britain, dollar Australia, na euro. I nwekwara ike gbanye ya na ihe ndi ozo ndi ozo dika Stellar, EOS, Ethereum, na Bitcoin Cash. Na mkpokọta, eToro na-enye karia 90 di na nwunye dijitalụ di iche iche ị nwere ike ịzụ na ịpị bọtịnụ.
Nwekwara ike ịnweta mkpo nke akụ ndị ọzọ - ị kwesịrị ikpebi ịgbasa pọtụfoliyo gị ozugbo ị mụtara otu esi azụ Bitcoin. Ewezuga iwu na ụdịrị akụ dị iche iche, otu uru kasịnụ azụmaahịa Bitcoin na eToro bụ na onye na-ere ahịa anaghị akwụ ụgwọ otu narị ụgwọ ụgwọ ọrụ. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ikpo okwu na-enye mgbasa siri ike na abụọ Bitcoin.
Nwere ike banye na eToro na nkeji nke ekele maka akụrụngwa nyocha ID nke akpaghị aka. Ọzọkwa, ị nwere ike iji ego na kaadị akwụmụgwọ dị ka Visa na MasterCard were akaụntụ gị, yana ọtụtụ e-wallets dị ka PayPal, Skrill, na Neteller. Uzo ahia a na enyere gi aka inweta ihe ngosi ego na $ 100,000 akwukwo ego igwu egwu, ma inwere ike ahia Bitcoin site na $ 25 karia!
Nke a dị mma maka ndị chọrọ iji atụmatụ bankroll wee lelee anya nke oke ha. Y’oburu n’ichoro uzo azuma ahia, igha achoputa atumatu eToro nke Onye ahia. Nke a na - enyere gị aka itinye ihe dịka $ 200 na pro a oge, ma gosipụta ahịa ha na - ebughi mkpịsị aka gị!
Azụmaahịa Bitcoin 100% ọrụ n'efu
Malite ahia ahia cryptocurrency site na $ 25
Amalite enyi na enyi na usoro ịkwụ ụgwọ
0.5% ego mgbanwe ma ọ bụrụ na ọ bụghị iji USD
2. EightCap - Kachasị mma Commission-Free Bitcoin CFD Broker
EightCap na-enye Bitcoin CFD trading, nke bụ kpamkpam enweghị ọrụ ma ọ bụrụ na ịbanye na akaụntụ 'Standard'. N'ihe banyere usoro iwu, onye na-ere ahịa n'ịntanetị a na-aza ajụjụ maka ụlọ ọrụ ego ASIC a ma ama. Onye ahia Bitcoin a na-akwanyere ùgwù na-enye ndị ahịa nchịkọta nke ngwá ọrụ nyocha iji nyere aka ịme mkpebi mkpebi crypto-trading.
Dika anyi rutere, itinye iwu na-emeghi nyocha bu ihe di iche na itinye ego na ego gi na ihe omuma. Nwere ike ijikọ akaụntụ EightCap gị n'ụzọ dị mfe na MT4 na MT5 - nke ị nwere ike ịmara na-enye ohere ịnweta plethora nke ngwa ahia, eserese, na ọdịnaya agụmakwụkwọ - ha niile bara uru maka ịkọwa echiche ahịa nke ugbu a na ọdịnihu.
Anyị kwuru na akaụntụ 'Standard' na mbụ. Ọ bụrụ n’ịlere onwe gị ịbụ onye azụmaahịa karịrị n’ozuzu - ị nwere ike ịtụle ‘Raw Account’. Whist a na - enweta ụgwọ ọrụ $ 3.50 na azụmaahịa ọ bụla - a ga - ewepụsa gbasara ọtụtụ klas akụ.
EightCap na-enye gị ụbọchị ngosi ngosi ego n'efu 30 - nke dị mma ịmụ ụdọ etu esi azụ ahịa Bitcoin n'ụzọ enweghị ihe ọghọm. Nwere ike ịmalite site na nkwụnye ego kacha nta nke $ 100 na ikpo okwu na-anabata ụdị ịkwụ ụgwọ dịka kaadị akwụmụgwọ / debit, nnyefe ụlọ akụ, na e-wallets dị ka Skrill, PayPal, na Neteller. Enwere ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ọzọ dabere na ikike gị.
ASIC nyere ikikere ma hazie ya
Azụmaahịa Bitcoin n'efu
Free ngosi naanị dịruru 30 ụbọchị
3. Capital.com - Onye Mbido-Enyi na Enyi Bitcoin Broker
Capital.com na-anabata ndị ahịa sitere na mba 200 ma ọ dị mfe ịnyagharịa, nke mere ka ọ dabara nke ọma maka ndị mbido. Can nwere ike ahia Bitcoin CFDs ebe a na-enweghị akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla ma ọlị. Enwekwara ihe onwunwe 3,000 ndị ọzọ ịhọrọ. N'ụzọ dị oke mkpa, ikpo okwu dị n'okpuru iwu siri ike nke FCA na CySEC, yabụ na ị maara na nke a bụ ebe nchekwa iji zụta ma ree ego dijitalụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịdịmma nke ngwa, Capital.com nwere onye nwe onwe ya akpọrọ ‘Investmate’. N'ihe banyere akwukwo akwukwo, enweghi nsogbu. Ndị ahịa nwere ike ịnweta ngwa ọrụ azụmaahịa zuru oke nwere mkpokọ nke usoro ọzụzụ azụmaahịa, ngwa ngwa ngwa ngwa, na ndị ọzọ. Nwere ike iji ngwa ọrụ 'Ebumnuche Mmụta', nke na-enye gị ohere isetịpụrụ onwe gị ụfọdụ ebumnuche ego.
Nwere ike ịmalite na Bitcoin na-eweta site na naanị $ 20. Ọzọkwa, onye na-ere ahịa na-anabata ọtụtụ ụdị ịkwụ ụgwọ site na nnyefe waya na debit / kaadị akwụmụgwọ na e-wallets dị ka Skrill, Neteller, na Trustly - ịkpọ aha ole na ole. Nke kachasị mma, Capital.com bụ onye na-enweghị ọrụ na-akwụghị ụgwọ na mgbasa ozi na-agbasakarị ike mgbe ị na-azụ Bitcoin CFDs!
Azụmaahịa Bitcoin 100% enweghị ụgwọ
Iwu sitere na ozu ndị a na-akwanyere ùgwù FCA na CySEC
Enweghi ike itinye ego na akụ ọdịnala
4. AVATrade - Azụmahịa Bitcoin CFDs na Nnweta Nnukwu nke Nyocha Techincal
AvaTrade maara nke ọma na oghere azụmahịa Bitcoin. N'ezie, onye na-ere ahịa n'ịntanetị anọwo na-akwadebe oké osimiri nke ndị ahịa dịgasị iche iche kemgbe ihe karịrị afọ iri ugbu a. Uzo ahia a na aru oru n’okpuru usoro nkwenye siri ike dika otutu ndi mmadu choro. Nke a gụnyere FCA, ASIC, MiFID, JFSA, PFSA, BVI, FRSA, FSCA, IIROC, na ADG.
Onye ahia ahia di elu a na enye ohere inweta otutu ihe ahia. Nke a gụnyere crypto-fiat abụọ dị ka BTC / USD, BTC / JPY, na BTC / EUR. A ga-ere ụdị abụọ a ka CFDs, yabụ buru n'uche ụgwọ ego ị ga-akwụ ụgwọ n'abalị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụrụ na ire na mbugharị, onye na-ere ahịa nwere ngwa nke ya akpọrọ AvaTrade GO. The ngwa nwere otu nnukwu ego nke muta ihe onwunwe na trading ngwaọrụ.
Nke a gụnyere simulators akaụntụ, demos, eserese na-agbanwe agbanwe, ntuziaka azụmaahịa, na ndị ọzọ. Ọzọkwa, AvaTrade dakọtara na MT4 na MT5. Ọ bụrụ n'ịchọrọ inweta nghọta site na ndị ahịa Bitcoin ndị ọzọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya - ị nwere ike ijikọ akaụntụ ahịa gị na DupliTrade ma ọ bụ Zulutrade ebe ị nwere ike 'dịka', 'soro', na 'ikwu' banyere ndị ahịa ndị ọzọ, atụmatụ, na mmelite .
Nke a bụ ụzọ dị mma iji dozie yana mụta ins na out nke ahịa site n'aka ndị ahịa nwere oge nwere ọtụtụ ahụmịhe bara uru. Imirikiti ndị ahịa na-enwe ike itinye ego site na iji kredit na kaadị debit yana nnyefe ego. Fọdụ ga-enwe ike iji e-wallets dị ka Neteller - agbanyeghị na nke a anaghị agụnye EU na Australia. Nwere ike ịmalite site na nkwụnye ego kacha nta nke $ 100
Nkwụnye ego dị ka $ 100
Azụmaahịa Bitcoin na-enweghị akwụ ụgwọ ọrụ
Comprehensive AvaTradeGO ngwa nwere ihe mmuta na ngwa oru
Mbụ ngosi akaụntụ expires mgbe ụbọchị 30
5. EuropeFX - Bitcoin Broker at Kwekọrọ n'Ozizi na otutu nyiwe
EuropeFX na-enye ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile ohere ịnweta ahịa niile. N'ebe a, ị nwere ike ịzụ Bitcoin CFDs na-enweghị akwụ ụgwọ pasent na ụgwọ ọrụ. Ọzọkwa, dị ka ọ dị na ndị na-ere ahịa niile na ndepụta anyị - a na-achịkwa ikpo okwu a. N'okwu a, iwu sitere na CySEC.
Onye na - eweta Bitcoin a anaghị eme ihere ma a bịa n'ịzụ ahịa. Can nwere ike jikọọ akaụntụ gị MT4 / 5 ma ọ bụ nanị na-arapara na proprietory trading n'elu ikpo okwu EuroTrader2. Enwere ọtụtụ akaụntụ dị dabere na ọkwa gị na azụmaahịa Bitcoin.
Nke a na-amalite site na nkwụnye ego kacha nta nke $ 200 maka akaụntụ ọkọlọtọ - ma na-aga ruo $ 50,000. A na-eji nke a eme ihe maka ndị ahịa nwere ahụmahụ bụ ndị chọrọ onye njikwa akaụntụ onwe ya, akara ngosi dị elu, na akwụkwọ akụkọ EuropeFX mgbe niile.
With Kwekọrọ n'Ozizi na MT4 na 5
Nkebi nke 6: Mụta otu esi azụ ahịa Bitcoin Taa - Walkthrough
Mgbe ịmechara ya na Nkebi nke 6, o doro anya na ị dị njikere ịmụta etu esi azụ Bitcoin na ezi uche. Nke mbu, ikwesiri imeghe akuko site na ndi nlere anya na nke oma.
Iji mee ka ihe dị mfe, anyị na-eji Bitcoin broker eToro maka ije ije anyị.
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ileta ebe nrụọrụ weebụ eToro wee kụrụ 'Jikọọ Ugbu a'. Ikwesiri itinye ụfọdụ ozi gbasara onye ị bụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ozi achọrọ na oge a dị ezigbo mkpa - aha gị, email, na ndị dị otú ahụ.
N'ụzọ dị oke mkpa, dịka kwa KYC iji gbochie mpụ ego - a ga-achọkwa ka ị bulite NJ ID nke gọọmentị nyere. Na-esote, ị ga-ebufe ihe akaebe nke adreesị gị. Imirikiti mmadụ na-eji ụgwọ ụlọ ọrụ ma ọ bụ nkwupụta ụlọ akụ na nso nso a.
Ebugote NJ nwere ike ichere ugbu a ma ọ bụrụ na ịnweghị ya iji nyefee. Agbanyeghị, ị ga-emerịrị akụkụ a nke usoro ntinye aka tupu ịme arịrịọ iwepụ (ma ọ bụ tinye karịa $ 2,250).
Received nata email nkwenye gị na akaụntụ, ị nwere ike ugbu a ego akaụntụ gị na-enyere gị aka ahia Bitcoin n'ụlọ!
Họrọ n'ime usoro ịkwụ ụgwọ dị ebe ị bi wee tinye ego ịchọrọ itinye na akaụntụ ahịa gị ọhụrụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, na eToro enwere nhọrọ dị iche iche ịhọrọ, dabere na mmasị onwe gị, yana ọnọdụ gị.
Nzọụkwụ 4: Bido ahia Bitcoin
Usoro ntinye aka fọrọ nke nta ka ọ gwụ. Tradezụ ahịa Bitcoin ugbu a ịkwesịrị ịtụ ahịa na eToro dị ka anyị kwurula na mbụ. Enwere ike ịpịgharịa gaa Nkebi nke 2 maka ịmeghachi iwu.
Agbanyeghị, ịkwesịrị ịhọrọ n'etiti ịzụta ma ọ bụ ree, yana ire ahịa ma ọ bụ belata iwu ịmalite.
Dịka anyị siri kwuo, ọ dịkwa mma ịtọlite ​​iwu nkwụsị na nnata na azụmaahịa ọ bụla.
Họrọ ego gị, lelee ozi niile banyere, wee kụọ 'Open Trade'. N'oge a, eToro ga-eme iwu gị dịka na mgbe iziro.
Mụta otu esi azụ ahịa Bitcoin - Mkpebi ahụ
N'ime nke a Mụta otu esi ahia ahia Bitcoin, anyị ekwuola banyere mkpụrụ na mkpọchi nke ịzụ ahịa na mkpa ọ dị ịhazi na njikwa ihe egwu. Ọ dịkwa oke mkpa ịbanye na ọhụụ ọhụụ ọ bụla meghere anya ụgwọ gị.
N'ụzọ dị oke mkpa, belụsọ na ị na-eme atụmatụ ịzụ ahịa na-agabiga site na mgbama ma ọ bụ ngwa ahia Detuo - ị ga-azụrịrị onwe gị na ahịa Nke a kwesịrị ịgụnye ịmụ nyocha dị mkpa na nka na ụzụ, ịnwale nkuzi nke Bitcoin, yana itinye usoro azụmaahịa doro anya n'ọnọdụ ọ bụla.
eToro na-enwu n'ụzọ niile. N'ebe a, ị nwere ike ịzụ ahịa Bitcoin n'efu - na gburugburu nchekwa na iwu (ekele FCA, CySEC, na ASIC). Top-gosiri ore na-enye a free ngosi akaụntụ na-anabata ikpo nke ngwa ngwa na-adaba adaba ụdị ịkwụ ụgwọ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịmalite azụmaahịa Bitcoin na ihe na-erughị nkeji 10!
Enwere m ike ịmụta otu esi azụ ahịa Bitcoin n'efu?
Ee, ị nwere ike ịmụta ịzụ ahịa Bitcoin n'efu site na iji akaụntụ ngosi ma ọ bụrụ na onye na-ere ahịa gị na-enye otu. Agbanyeghị, ọ dịkwa mkpa ka ị rụọ ọrụ ụlọ gị ma mụta ins na outs of the market. eToro na-enye a free Bitcoin ngosi akaụntụ kwala $ 100,000 na akwụkwọ ego na-eme na.
Kedu ka m ga-esi echekwa Bitcoin mgbe m na-ere ya?
Enwere ike ịchekwa Bitcoin na obere akpa nke gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchekwa mkpụrụ ego dijitalụ gị na ikpo okwu eToro - ị nwere uru mgbakwunye agbakwunye site na ọchịchị atọ. Ghara ikwu eziokwu a na-abịa na-enweghị mmezi ụgwọ na trading bụ ọrụ-free!
Kedu ihe kachasị m nwere ike itinye na Bitcoin?
Opekempe ego i nwere ike ahia ma ọ bụ itinye ego na Bitcoin na-adabere na gị ore oke. Na eToro, ị nwere ike ahia Bitcoin site na obere ihe $ 25 - enweghị ọrụ!
Enwere m ike ahia Bitcoin megide ezigbo ego?
I nwere ike n'ezie. A na-akpọ nke a ụzọ 'crypto-fiat', ma ọ bụ ụfọdụ 'obe ego'. Pdị abụọ Bitcoin nwere gụnyere BTC / EUR, BTC / USD, BTC / GBP, BTC / JPY, were gabazie.
Enwere m ike ịme azụmaahịa Bitcoin?
Eeh, ọ bụrụ n ’ịkọ amụma ịrị elu ma ọ bụ ịdaba na ọnụ ahịa Bitcoin n’ụzọ ziri ezi - tinyezie usoro ziri ezi - ị ga-enweta uru na azụmaahịa gị.
Emelitere ikpeazụ: February 24th, 2021